Doormats ekutanga kugamuchira mumba mako | Bezzia
Susana godoy | 09/09/2021 14:00 | Zvishongedzo zvekumba
Zvese zvese zvekushongedza zvinoverengeka. Naizvozvo, kana tichishongedza imba yedu tinogara tichiedza kuipa chaiyo uye pachedu kubata. Kana iwe uri mumwe weavo vanosarudza kusarudza mavambo, iwe uri mune rombo neaya Doormats yepakutanga. Zvinogara zvichitaurwa kuti tsamba yekuvhavha inotaura zvakawanda nezve zvemukati uye mune iyi kesi hazvizove zvishoma.
Nekuti nekutenda kumasowe aya, mufaro unenge uri chikamu chedanho rekutanga ratinotora. Unogona kusarudza ku mazwi ekutanga, mafirimu replicas kana zvimwe zvakawanda zvinoratidzwa kubva pasi. Iwe unenge uri mumwe wevanonyanya kufarira vavakidzani muchivako. Iwe haufunge kudaro?
1 Iwo akanakisa meseji kune vashanyi vanounza doormats
2 Doormats yekugamuchira nenzira yekutanga
3 Tsika doormats
4 Yako aunofarira akateedzana
Iwo akanakisa meseji kune vashanyi vanounza doormats
Nguva dzose, kana kupotsa, kushanya kwemusha kunogamuchirwa. Asi hongu, kunyangwe isu tisingade kuoneka setisina hunhu, tinoramba takanyarara pamusoro pezvinhu zvatinofunga. Naizvozvo, kana iwe usingazive matauriro avanoti havauye vasina chinhu, hapana chakafanana nekubheja mamwe doormat ane mitsara yakadai se: 'Vashanyi vepamusoro vanorera doro nekudzikisa marara.' Zvichida panguva yekupinda ivo vanotora seyakareruka kana zvirinani, kumwe kunyemwerera kucharatidza uye kana uchiifarira, unogona kuitenga pano zvakafanana.
Dzimwe doormat dzinonongedzera kune waini, kana kusiya yakashata mamiriroKunyangwe isiri yechinhu, ndechimwe chinhu chatinokoshesa. Vamwewo vanotova nemitemo yepamba, zvekuti hapana munhu anoshamisika achipinda. Nekudaro, iwe unenge uchitoziva zvauri kupokana nazvo. Muenzaniso senge izvi ndeyechokwadi kushamisika munhu wese anopfuura napo. Saka inofananidzwa neyekutanga, sekuda kwatinoita.
Doormats yekugamuchira nenzira yekutanga
Izwi rekuti 'kutambira' rinowanikwawo mune huwandu hwakawanda hwezvinhu izvi. Asi ichokwadi kuti avo vatinowana muAmazon vanoitakura neimwe nzira inoshamisa. Nekuti chete nemazwi zvinogona kunge zvisina kukwana, saka, isu tinobheja pakuita kutaurira kumafirimu senge 'Star Wars' uye uvaendese kudivi rine rima ne izvi yakakosha doormat.
Kunyangwe kana iwe uchida mimhanzi, haugone kukanganwa imwe yeiyo Nziyo dzeSpanish dzedombo senge iyo Miguel Ríos akaimba panguva iyoyo. Zvakanaka izvozvi, iwe unogona zvakare kuva nazvo patsoka dzako uye hauna kumbobvira wataura nani nepfungwa yakafanana neiyo pano tinokuratidza. Pachagara paine zano kune raunoda!
Zvirokwazvo iwe unogona zvakare kuzviita yako yega doormat nenzira yakasarudzika, zvekuti mhuri yese inomiririrwa neimwe nzira kana imwe. Nekudaro, chinhu chakanakisa chaungaite kubheja pakuisa mazita ako pasi peimwe yeshangu mune dhizaini sezvavanoratidzika. pano. Kana iwe usina vana, unogona kunge uine mhuka dzinovaraidza uye dzinogona kuvepo padhoo rako, sekunge iwe uchigara wega kana sevanhu vaviri. Nekuti ese marudzi emhuri anomiririrwa mune yakadai pfungwa.
Yako aunofarira akateedzana
Kana paine akateedzana anga ari iwo anodakadza nguva dzese izvo 'Shamwari'. Iye zvino vauya pamwechete zvakare mune imwe mhando yezvinyorwa iwe yaunogona kunakidzwa pamapuratifomu. Asi kumashure ndezvese izvo zvinoshamisira zvemafurati maviri uye shamwari nhanhatu idzo dzatiunzira kunyemwerera kuzhinji kupfuura zvaitarisirwa. Mutambo uyo kunyangwe kufamba kwenguva kuchiramba kuri kubudirira kukuru, nekudaro, hapana chakafanana nekurangarira chimwe chezviitiko zviripo. Sezvo isu tese tichiziva cafe uko kwavaive nesofa yavo vega uye vakasangana muswere wese wezuva. Iye zvino unogona kugamuchira kumba ne 'Central Perk' yauinayo pano. Haisi iyo pfungwa yakanaka here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Zvishongedzo zvekumba » Yekutanga doormat yekugamuchira mumba mako